Home Wararka Dadkii laga soo tarxiilay Somaliland oo wata kaararka cod -bixiyayaasha Somaliland
Dadkii laga soo tarxiilay Somaliland oo wata kaararka cod -bixiyayaasha Somaliland
Sawir cad ayaa ka soo baxaya masaafurinta in ka badan lix boqol oo qof oo Soomaali ah oo ay dawladda Somaliland ka masaafurisay deegaanada hoos yimaada Laascaanood. Badi Dadka la soo tarxiilay waxa ay warsan kaararkii diiwaangelinta codbixiyeyaasha oo laga siiyay Somaliland.
“Waxaan ka codeeyay doorashooyinkii baarlamaanka ee u dambeeyay iyo doorashadii madaxweynenimada ee 2017” ayuu yiri mid ka mid ah Soomaalida gudaha laga masaafuriyay, oo codsaday inaan magaciisa la sheegin oo tustay kaarka diiwaangelinta cod -bixiyaha (dib loo dhigay).
“Inta badan dadka waaweyn ee ka soo jeeda gobolka Koonfur Galbeed ayaa ka codeeyay doorashooyinka. In badan oo naga mid ah ayaa ku dhashay kuna koray Laascaanood. Waxaa naloola dhaqmay sidii kuwo dabadhilif u ah loollanka awoodda maxalliga ah ”ayuu raaciyay.
Wararka qaar ayaa sheegaya in maleeshiyaadka Somaliland ay dhac u gaystay ganacsato badan oo yar yar ka hor inta aysan ku qasbin baabuur xamuul ah oo ku sii jeeday degmooyinka Burtinle halkaas oo ay kala kulmeen soo dhaweyn diiran iyo dareen dhab ah oo ka yimid dadka deegaanka.
“Waxaa la ii diiday inaan gabadhayda ku quudiyo baabuur xamuul ah laakiin markii aan nimid Burtinle gabadhayda oo u xanuunsatay gaajo darteed ayaa la geeyay isbitaal halkaas oo lagu daweeyay. In kasta oo aan soo marnay, waxaan weligeen u mahadcelinaynaa dadka reer Burtinle sida wanaagsan ee ay noo muujiyeen ” ayuu yiri nin kale oo laga soo masaafuriyay Laascaanood.